Kutarisa kudzima basa rekudhinda rekuparadza? Windows 10 inomhanya sevhisi yekuchengeta yako yekudhinda uye fax mabasa anoshanda mushe, asi panogona kunge paine zvikonzero zvaunoda kuti zvimiswe. Tichakuratidza kuti ungazviita sei.
Chimwe chikonzero chevamwe vanhu chinoremadza sevhisi kusimuka kweiyo DhindaNightmare kunetsekana izvo zvinogona kurega mavhavha atore uye ari kure kudzora maPC. Ipo Microsoft ichigovana chengetedzo kuraira kweichi chinokanganisa uye inoshanda pachigamba chakakodzera, unogona kudzima basa riri panjodzi.
Chii chinonzi PrintNightmare?
Iyo PrintNighmare ndeye zero-zuva kushushikana iyo inoshandisa iyo yakakosha kuyerera nekumhanyisa yakanetsa printer mutyairi (enzvimbo kana kure) kuti uwane kutonga kwePC yako. Unogona kuverenga zvakawanda nezve kuti inoshanda sei. Panguva ino, zvese Windows shanduro dziri mumutsara wemoto nekuti kushomeka kuri mune iyo Windows Dhinda Spooler sevhisi (spoolsv.exe), iyo inobata mabasa ekudhinda.
Kusvikira Microsoft yaburitsa chigamba chakakodzera, imwe sarudzo yekugadzirisa mamiriro acho wega ndeyokushandura mutemo wakasarudzika weprinta uchishandisa Boka reParamende Edhisheni. Nenzira iyi unodzivirira chero anouya kure ekubatanidza zvikumbiro kune yako printa. (Zvisinei, izvi zvinongoshanda chete paProfessional editions ye Windows 10.)
Kana iwe usingakwanise kushandura marongero eboka reboka (semuenzaniso, kana iwe uchimhanyisa iyo Yekutanga edition ye Windows 10), Unogona kudzima iyo Print Spooler sevhisi zvachose pakombuta yako uchishandisa iyo Windows Panzvimbo yemasevhisi. Ramba uchifunga kuti iwe uchazoda maneja account account kune izvo.
Dzima iyo Printa Spooler Service Kubva Windows Services Panel
Unogona kushandisa Windows Services pani yekudzima Dhinda Spooler masevhisi kubva kumhanyisa otomatiki, kunyanya kana iwe uchishandisa izwi ma processor kana mamwe maapplication.
yambiro: Iwe uchadaro kwete kukwanisa kudhinda kana kutumira fax nePC yako nepo Printa Spooler sevhisi yakaremara. Paunenge wagadzirira kupurinda zvakare, iwe uchafanirwa kuigonesa nenzira imwechete yawakashandisa pano.
Chindai Windows+ R kuvhura Run dialog bhokisi. Tevere, nyora "services.msc" uye rova ​​Enter kuti utange iyo Windows panhare yemasevhisi.
Kubva pane iyo Paneli reSevhisi, peta pasi wobva wadzvanya kaviri pa “Dhinda Spooler.”
Kana hwindo rePrinta Spooler Properties ravhurwa, sarudza kudonha padhuze ne "Rudzi rwekutanga:" uye sarudza "Akaremara."
Sarudza bhatani "Mira" kumisa sevhisi uye sarudza iyo "Ok" bhatani kushandisa shanduko.
Vhura iyo windows Paneli rewindo.
Ndizvo. Kunyange komputa yako yakachengeteka izvozvi, zano rakanaka kuisa zvese tsva Windows 10 inogadziridza pakombiyuta yako.
Dzima iyo Printa Spooler Service Sisitimu Uchishandisa Boka Policy Edhiyo
Kana iwe uchida kushandisa iyo printa, iwe uchafanirwa kuibatanidza kune yako Windows komputa yekudhinda imomo. Asi kutanga, unofanirwa kudzima mutemo weprinta unodzivirira zvese zvinouya kure zvinongedzo uchishandisa Boka reParamende Edhisheni.
Cherechedza: Iyi nzira haishande kana uchimhanya Windows 10 Imba nekuti haugone kuwana iyo Boka Policy Mhariri.
Dzvanya Kutanga, nyora "gpedit" mubhokisi rekutsvaga, uye tinya Enter kuti vhura iyo Boka Policy Mupepeti.
Sarudza "Kugadziridza Komputa" kubva pane yekuruboshwe pane.
Sarudza "Matemplate Ekutonga" pasi pechikamu ichocho.
Tevere, sarudza "Maprinta."
Pane kurudyi pane, peta pasi kuti usarudze mutemo wakanzi "Bvumira Kudhinda Spooler Kugamuchira Vatengi Kubatana" wobva wadzvanya pairi kuti uvhure marongero ayo.
Sarudza "Akaremara" kubva padanho rewindo uye sarudza iyo "Zvakanaka" bhatani.
Vhara iyo Boka Policy Policy. Mushure meizvi, iwe unofanirwa kutangazve iyo Dhinda Spooler sevhisi kuti shanduko dziite.
Izvo zvakati, anorwisa achiri kugona kumhanyisa kodhi imomo mukombuta yako. Saka shandisa yako unofarira antivirus application kumhanyisa scan kuti uwane uye kugadzirisa chero matambudziko pane komputa yako.